YoYo Tubi Apk Dhawunirodha Ye Android [Mafirimu Azvino] - Luso Gamer
A new varaidzo application iri kuitika pakati pevashandisi veAndroid. Ehe, isu tiri kutaura nezve YoYo Tubi uye yazvino Apk faira ndeye mahara kurodha kubva pano. Kuisa iyo application kunopa kusingaperi varaidzo kusanganisira kutenderera kweTV.
Kunyangwe iyo internet nyika yakatozadzwa nezvakasiyana Movie Mapurogiramu. Izvo zvakakurumbira uye zviri kuitika pakati pevateveri. Nekudaro, mazhinji acho angangoda kunyoreswa uye anodhura kusvika kumazana emadhora.
Izvo zvinodhura uye zvisingagoneki kune avhareji mafeni. Saka tichitarisa chikumbiro chefani uye kuchengetedzeka, vagadziri vakazounza iyi application nyowani. Izvo ndezvemahara kudhawunirodha uye hazvidi mvumo isingakoshi yekuwana zvirimo.
Chii chinonzi YoYo Tubi Apk
YoYo Tubi Android ndeye online varaidzo application yakagadzirwa na richardcampbell8526. Iye zvino kubatanidza iyi imwechete application mukati me smartphone. Inogona kubvumidza vataridzi kuti vatepfenyure mabhaisikopo asingaperi, Series uye TV Zvirongwa zvemahara.
Vanhu vari kuomerwa nebasa ravo remazuva ese zvakaipa. Chikonzero cheizvozvo imhaka yekubatikana kwehupenyu hurongwa uye kuoma kwemaitiro mabasa. Kare apo vanhu vaive nenguva yemahara, vanosarudza kufambisa zvirimo pamusoro pemonster skrini.
Chikonzero chekutarisa zvirimo pamusoro pezviratidziro zvakakura zvakadaro kunakidzwa nenguva yemahara. Nekudaro, ikozvino mamiriro achinja uye vanhu havana nguva yekunakidzwa nezviri mukati memonster skrini. Vanhu vanongoshanyira dzimba kuti vazorore mushure mekushanda kwenguva refu.
Saka mumamiriro ezvinhu akadai, vagadziri vadzoka neichi chishandiso chitsva. Iko vataridzi vanogona ikozvino kufambisa zvirimo pamusoro peiyo android smartphone nekuisa imwechete Apk faira. Ehe ikozvino kuisa iyi imwechete application kunopa iyo cinematic chiitiko mahara.
zita YoYo Tubi
zera 40.08 MB
Package Zita com.yoyo.freetubi.flimbox
chikamu Apps - Entertainment
Uyezve, vaoni vangangoda kubhadhara imwe mari yekunyoresa. Asi neichi android application, vashandisi havambofi vakasungirwa kubhadhara chero mari. Chinhu chete chavanoda i-smartphone uye yazvino vhezheni yekushandisa.
Iyo yakagadziridzwa vhezheni yeApk faira inosvikika kuti uwane kubva kune yedu webhusaiti. Ingo dhawunirodha yazvino Apk faira kubva pano uye unakirwe isingaperi premium zvemukati nekudzvanya kumwe chete. Kuita kuti zvirimo zvisvike, vagadziri vakagovera mavhidhiyo muzvikamu zvakasiyana.
Chikamu chega chega chinopa niche-yakavakirwa zvemukati. Iyo nyanzvi zvakare inodyara iyi yakadzama yekumisikidza dashboard mukati mekushandisa. Ikozvino kuwana iyo yekuseta dashboard kuchabatsira kugadzirisa akakosha maficha anosanganisira mapoka pamusoro pekudzvanya kamwe chete.
Avo vanoda kunakidzwa nemabhaisikopo erudo uye vanogara vachitsvaga kutsvaga mavhidhiyo ane chekuita nerudo. Iye zvino vanokwanisa kuwana zvinyorwa zvakadaro zvakananga kusarudza chikamu cherudo. Kunyangwe vashandisi vanobvumidzwa kuisa yakavanzika password pane imwe chikamu.
Uyu ndiwo mukana wakanakisa wevanoda varaidzo kuti vatepfenyure kusingaperi Mafirimu uye Series mahara. Chavanongoda ndiyo yazvino vhezheni yeYoYo Tubi Dhawunirodha. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete.
Iyo app faira yakasununguka kuwana.
Kuisa iyo app kunopa zvakawanda zvekuvaraidza.
Izvo zvinosanganisira Mafirimu uye Series.
Zvirongwa zveTV zvinosvikikawo kutenderera.
Zvikamu zvakawanda zvinowedzerwa.
Tsika yekutsvaga sefa iripo yekusarudza.
Chikamu chakasiyana chinowedzerwa kune vanoda rudo.
Inbuilt vhidhiyo inoridza inowedzerwa.
Maitiro ekurodha YoYo Tubi App
Kana zvasvika pakurodha yazvino vhezheni yeApk mafaera. Vashandisi veAndroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga maApk mafaera. Kuita chokwadi chekuchengetedza uye kuvanzika kwemushandisi.
Takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi chekushanda zvakanaka, isu hatimbope iyo Apk mukati mekurodha chikamu. Kuti utore iyo yakagadziridzwa vhezheni Apk faira ndapota tinya pazasi apa link.
Isu takatoisa iyo application pane akasiyana ma smartphones. Mushure mekuisa iyo app pama smartphones akasiyana, hatina kuwana dambudziko rakananga mukati. Saka vashandisi veandroid vanogona kuisa uye kunakidzwa zvemukati pasina kunetseka.
Kusvika parizvino mamwe akasiyana maapplication ane chekuita nevaraidzo akagovaniswa pano. Kuti unakirwe neaya mamwe maapplication ndapota isa anotevera maapplication. Ndivo Cuco TV Apk uye Black TV 4K Apk.
Saka iwe unoda kutepfenyura Mafirimu uye Series, asi usingakwanise kuwana yechokwadi chikuva. Iko vashandisi veAndroid vanogona kufambisa zviri nyore zvisingaperi zvemahara. Zvino mune izvi, isu tinokurudzira avo vashandisi venhare kuisa YoYo Tubi Apk mukati me smartphone.
Categories Entertainment, Apps Tags Vadivelu Comedy Movie App, YoYo Tubi, YoYo Tubi Apk, YoYo Tubi App, YoYo Tubi Download Post navigation
Kral Bozguncu Apk Dhawunirodha Ye Android [Nhabvu Zvabuda]